यो ईसापूर्व तेस्रो शताब्दीतिरको कथा हो। त्यस बेला चीनको भू-भागमा वै, शु र वु तीनवटा राज्य आपसमा मुखामुख गरिरहेको स्थिति देखिएको थियो। तीमध्ये वै राज्य उत्तरी भेगमा परेको थियो भने शु राज्य दक्षिण-पश्चिमी भेगमा र वु राज्य दक्षिणी भेगमा। यसैबीच एकपल्ट वै राज्यले जल-मार्गमार्फत याङ-त्सी नदीको छेउछाउमा अवस्थित वु राज्यमाथि धावा बोल्न भनेर ठूलो संख्यामा सैनिकहरु पठाएको थियो र केही दिनमै वै राज्यको सेना वु राज्यको सिमानादेखि नजिकै पुगी हमलाका लागि अनुकूल मौका पर्खन भनेर नदीको किनारामा छाउनी बनाएर बसे।
शु राज्यका मार्शल चौ युले वै राज्यका सेनाको अवस्था बारे अध्ययन गरेपछि खास गरी बाँणको प्रयोग गरी आक्रमण गर्ने शत्रुहरुको सामना गरिछाड्ने निर्णय गरेका थिए। तर समश्या के रहेछ भने त्यस संग्राममा नभई नहुने एक लाख जति बाण छोटो समयभित्र कसरी बनाइसक्ने? किनभने तिनताकाको वु राज्यमा भएका कारिगरहरुको क्षमता अनुसार यति बाण बनाउनका लागि कम्तिमा पनि दश दिन चाहिन्छ। तर वु राज्यको प्रतिरक्षाका लागि दश दिन पर्खनु हुँदैहुँदैन।
 यस बेला चु राज्यका सैनिक सल्लाहकार चु क ल्याङ संयोगवश वु राज्यको भ्रमणमा आए। उनी एकजना अति बुद्धिमानी व्यक्ति थिए। त्यसैले मार्शल चौले उनसँग कसरी सकेसम्म छिटो चाहिए जति बाण बनाउन सकिन्छ भनेर सल्लाह मागे। चुले चौलाई तीन दिन भए पुग्छ भन्ने जवाफ दिए। चुले यो अत्युक्तिपूर्ण कुरा गरेको होला भन्ने सबैले ठहर गरे। तर चुले भने जंगी आदेश-पत्रमा सहीछाप गरेर दिए जसको अर्थ के रहेछ भने निर्धारित समयभित्र कार्यभार पूरा गर्न नसकेमा सजाय स्वरुप टाउको काटिने छ। सैनिक सल्लाहकार चु क ल्याङले यो कार्यभार स्वीकार गरे तर उनि रत्तिभर आत्तिएको देखिंदैनथे। उनले वु राज्यका मन्त्री लु सुलाई भने-- यति धेरै बाँण जुटाउनका लागि साधारण जुक्ति प्रयोग नगर्नु स्वाभाविकै कुरा हो। यसका अतिरिक्त चुले आफ्ना लागि बीसवटा डुंगा तयार गर्न, प्रत्येक डुंगामा तीसजना जवानको व्यवस्था मिलाउनअनि पूरै डुंगालाई कालो कपडा र बाहिर परालले मोड्न अनुरोध गर्नुका साथै लु सुसँग आफ्नो गोप्य योजना बारे अरु कसैलाई पनि नबताउन बारम्बार आग्रह पनि गरे। लु सुले यसको भेद बुझ्न नसके तापनि चुले भने अनुसार सबै कुरा ठिकठाक पारे।
चु क ल्याङले तीन दिनभित्र एक लाख जति बाण तयार गर्नसक्ने वचन दिइसके तापनि पहिलो दिन कुनै प्रयास नभएको, दोस्रो दिन यस्तै भएको र तेस्रो दिन आउन लागे तापनि एउटा बाण पनि देख्न नपाएकाले सबै नै चिन्तित हुनथाले। किनभने समयमै कार्यभार पूरा गर्न नसकिएमा चुको प्राण नै उड्ने पक्का छ। तेस्रो दिनको मध्यरातमा अरुले चाल नपाउने गरी चुले लु सुलाई एउटा सानो डुँगामा बोलाए। लु सुले "केका लागि मलाई यहाँ बोलाउनुभएको हँ?" भनेर सोधे। चुले "हजूर मसँगै बाण लिन जानुहोस् न" भने। लु सुले शंका लागेर फेरि सोधे--"कहाँ लिन जाऔं भन्या?" चुले मुसुक्क हाँस्दै जवाफ दिए- "बेला आइपुगेपछि हजूरलाई थाहा भइहाल्छ नि!" यति भन्दै चुले ती बीसवटा डुंगालाई लामो डोरीले आपस्तमा जोडे वै राज्यको सैनिक छाउनी रहेको स्थानतर्फ जान आदेश जाहेर गरे। त्यसै राति पूरै संसारलाई बाक्लो कुहिरोले छोपेको जस्तो भान हुन्थ्यो। नदीको जल-क्षेत्रमाथि आफ्नो हातका औंला समेत स्पष्टसँग देख्न सकिन्दैनथ्यो। तर कुहिरो जति-जति बाक्लो हुन्थ्यो, उति-उति नै छिटछिटै अघि बढ्दैजान चुले आफ्नो डुंगा-दललाई निर्शेदन दिए। गन्तव्यस्थल पुगेपछि चुले डुंगा-दललाई शत्रुका सामुन्ने तेर्सिएर बस्न र डुंगामा रहेका जवानहरुलाई नगरा बजाउँदै कराउन अह्राए। लु सुले अति त्रसित भई चुलाई भने--"ओहो, हाम्रा यी बीसवटा डुंगामा तीन सय चानचुन जवानहरु मात्र छन। वै राज्यका सैनिकहरु हामीसित लड्न आएमा हामी पक्कै पनि मर्छौं।" चु क ल्याङले भनर् मुसुमुसु हाँस्दै भने: म ठोकुवा गरेर भन्छु कि यस्तो बाक्लो कुहिरो लागेको अवस्थामा शत्रुहरु बाहिर निस्केर आउँदैनन, हामी ढुक्क भएर रक्सी पिउँदै हेरौं न त" भनेर सम्झाए।"
उता वै राज्यको सैनिक छाउनीमा स्थिति अर्कै थियो: नगरा बजाएको र चिच्याउँदै कराएको आवाज सुनेर सेनापति छाओ छाओले हतार-पतार यसको जवाफमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारे छलफल गर्न सबै सेनानीहरुलाई बोलाए। अन्ततः याङ त्सी नदीमा अति बाक्लो कुहिरो लागेको हुँदा आइलाग्ने शत्रु पक्षको वास्तविक स्थिति नबुझेकाले त्यसका जवानहरु नदीबाट आफूपट्टिको किनारामा आउन नदिनका लागि आफ्नो जल-सेनाका धनुषकारहरुलाई बेस्सरी बाण हान्न पठाउने निर्णय गरियो। यसरी वै राज्यका सेनाद्बारा खटाइएका दश हजार जति धनुषकारहरुले नदीको किनारामा आई नदीमा आवाज निस्केको दिशातिर धुमधामसित बाण बर्षाए। क्षणभरमै चुको डुंगा-दलतिर बाणको बर्षा भयो र धेरै समय बित्न नपाउँदै सबै डुँगाका एकापट्टि ती परालका गुट्ठै-गुट्ठाभरि बाण छिरेका छिरै भए। यस बेला चुले बाण नलागेको पार्श्व शत्रु पक्षतिर उन्मुख हुने गरी सबै डुँगालाई छिटै फर्काउन निर्देशन दिए र चाँडै नै अर्कापट्टि पनि तारन्तार बाण लाग्नथाले। शायद डुंगामा चाहिए जति बाण परिसकेका होलान् भन्ने अन्दाज गरेपछि चुले आफ्नो डुंगा-दललाई द्रुत गतिमा फर्केर जान इशारा दिए। त्यस बेला कुहिरो पनि विस्तारै-विस्तारै फाट्दैगयो। कुराको वास्तविकता बुझेपछि वै राज्यका सेनालाई असाध्यै पछुतो लाग्यो।
चु क ल्याङको डुँगा-दल वु राज्यको सैनिक छाउनीमा फर्केर आउँदा पाँच सय जवान पठाएर बाण ओसार्ने तरखरमा वु राज्यका मार्शल चौ यू पर्खिरहेका थिए। राम्ररी हिसाब गरेपछि ती डुंगामा परालका गुट्ठै-गुट्ठाबाट झिकेर ल्याइएका बाणको संख्या एक लाख त पुग्छ पुग्छ। हुन त वु राज्यका मार्शल चौ यू पनि तीक्ष्ण बुद्धि भएका मानिसका रुपमा नाउँ कमाएका व्यक्तित्व हुन्, तर अब चु क ल्याङको बुद्धि बारे थाहा पाएपछि उनलाई पनि प्रशंसा गर्न करै लाग्यो। त्यसो भए चु क ल्याङले त्यहीं राति नदीको जल-क्षेत्र वरिपरि बाक्लो कुहिरो लाग्नसक्ने कुरा कसरी थाहा भयोहोला? ए, उनी त मौसमको परिवर्तन बारेको भविश्यवाणी गर्नमा पनि निपुर्ण रहेछन्। खगोल सम्बन्धी अनेक संकेतका आधारमा राम्ररी अन्वेषण गरेपश्चात् उनी यसै दिन राति सो जल-क्षेत्रमा बाक्लो कुहिरो लाग्नसक्ने निस्कर्षमा पुगे। हो, यस्तै गरी चु क ल्याङले आफ्नो चलाख बुद्धिको सहयोगमा शत्रु सेनाबाट सित्तै एक लाख बाण लिन सफ